iPhone Nọgidesiri Na Spinning Wheel? Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
enwere nsogbu na iphone nke chọrọ ka emelite ma ọ bụ weghachite ya
gmail ihe nkesa ozi iphone
budata ụlọ ahịa ngwa maka iphone
windows itunes amaghi iphone
iPhone Nọgidesiri Na Spinning Wheel? Nke a bụ ndozi!
Gị iPhone rapaara na nwa oji na-agba ogho na ị maghị ihe kpatara ya. Gị iPhone anaghị agbanye azụ n'agbanyeghị ihe ị na-eme! N'isiokwu a, m ga-akọwa otú idozi nsogbu mgbe gị iPhone rapaara na a spinning wheel .
Gịnị Mere My iPhone Nọgidesiri On A atụ Wheel?
Ọtụtụ mgbe, gị iPhone ego n'anya rapaara na a spinning wheel n'ihi na ihe na-ezighị ezi n'oge reboot usoro. Nke a nwere ike ime mgbe ị gbanye iPhone gị, melite ngwanrọ ya, tọgharịa ya na Ntọala, ma ọ bụ weghachite ya na nrụpụta ụlọ ọrụ.
Ọ bụ ezie na o yikarịghị, akụkụ anụ ahụ nke iPhone gị nwere ike mebie ma ọ bụ mebie. Anyị nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru ga-amalite na nchọpụta nsogbu software, mgbe ahụ nyere gị aka inweta nkwado ma ọ bụrụ na iPhone gị nwere ngwaike nsogbu.
mee wifi oku na iphone
Ihe siri ike nrụpụta na-eme ka iPhone gị gbanyụọ ma laghachi azụ. Mgbe gị iPhone mkpọka, freezes, ma ọ bụ na-enwe rapaara na a spinning wheel, a ike nrụpụta nwere ike ya na ọ laghachi.
Usoro nke ịrụ nrụpụta siri ike dịgasị dabere na ụdị iPhone ị nwere:
iPhone 6s, iPhone SE (Ọgbọ nke mbụ), na ụdị ndị okenye : N'otu oge pịa ma jide bọtịnụ Home na bọtịnụ ike ruo mgbe ihuenyo ahụ ga-aga kpamkpam oji ma akara Apple gosipụtara.
iPhone 7 : N'otu oge pịa ma jide bọtịnụ olu ala na bọtịnụ ike ruo mgbe ihuenyo gosipụtara na oji na njirimara Apple pụtara.
iPhone 8, iPhone SE (Ọgbọ nke abụọ), na ụdị ọhụụ : Pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, pịa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe ngosipụta ga-eji oji na akara Apple gosipụtara.
Ntọala siri ike ga-edozi nsogbu a ọtụtụ oge. Ọ bụrụ na ọ mere, ozugbo ndabere gị iPhone ka iTunes (PC na Macs na-agba Mojave 10.14 ma ọ bụ tupu), Chọta (Macs na-agba ọsọ Katalina 10.15 na nke ọhụrụ), ma ọ bụ iCloud . Ọ bụrụ na nsogbu a adịgide, ị ga-achọ nnomi data niile dị na iPhone gị!
Ọ bụ ezie na nrụpụta siri ike nwere ike idozi nsogbu ahụ nwa oge mgbe iPhone gị rapaara na wiilị na-agba ogho, ọ gaghị ewepụ nsogbu nke sọftụwia miri emi nke kpatara nsogbu na mbụ. Anyị na-akwado itinye gị iPhone na DFU mode ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-aga n'ihu na-eme.
A DFU (ngwaọrụ femụwe melite) weghachi bụ ihe kachasị dị omimi iPhone weghachi na usoro ikpeazụ ị ga - eme kpamkpam ịchịkwa ngwanrọ ma ọ bụ nsogbu ngwa ngwa . A na-ehichapụ akara ọ bụla nke koodu ma tinyeghachi ya na iPhone gị, ma arụnyere ụdị nke iOS kachasị ọhụrụ.
Jide n'aka na ndabere gị iPhone tupu etinye ya na DFU mode. Mgbe ị dị njikere, lelee nke anyị DFU weghachi ndu ịmụta otú e si eme nke a!
Oge eruola ka ị kpọtụrụ onye na-akwado Apple ma ọ bụrụ na iPhone gị ka nọ na-agbagharị. Gbaa mbọ hụ na hazie oge atọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-ewere gị iPhone n'ime Genius Bar. Apple nwekwara ekwentị na ndụ chat kwado ma ọ bụrụ na ị naghị ebi n'akụkụ ebe mgbere.
Were iPhone gị maka ntụgharị
’Ve dozie nsogbu ahụ na iPhone gị ma ọ na-agbanye ọzọ. Jide n'aka na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji kụziere ezinụlọ gị, ndị enyi, na ndị na-eso ụzọ ihe ị ga-eme mgbe iPhone rapaara na wiilị.
Nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị? Hapụ ha na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a!